FAHASALAMANA SY MEDICINE Archives - Afrikhepri Fondation
Talata 19 Oktobra 2021
Poizina tantely ho fitsaboana homamiadana sy sida
Bibikely mahatahotra tokoa ny tantely. Fantatsika ny anjara asan'izy ireo amin'ny fandotoana, na ireo tombony maro azo avy amin'ny vokatry ny tranon-tantelany. Saingy tsy noeritreretinay izany raha ...
Ny menaka voa mainty dia mitsabo ny aretina rehetra
Ny menaka voa mainty dia avy amin'ny voan'ny voninkazo kely maniry amin'ny aloky ny oasis ejiptiana. Matetika izy io dia antsoina hoe "menaka komina mainty" manerana ny Atsinanana. Tavoahangy iray ...
Ny majika ananan'ny zavamaniry fanafody nanazava an'i Dr Aka Félix (Lahatsary)
Dr Aka Félix, naturotherapist, dia miresaka momba ny tena fitaomana tsara amin'ny zavamaniry sy ny vatan'ny zavamaniry amin'ny fisian'ny olombelona.
Fampidirana ho an'i feng shui (Video)
Feng Shui dia zavakanto sinoa iray izay mikendry ny hampifanaraka ny herin'ny toerana iray mba hampiroboroboana ny fahasalamana, ny fahasalamana ary ny harena.
Ny ronono camel dia fanafody ho an'ny aretina toy ny diabeta sy ny homamiadana
Ny ronono rameva dia ankasitrahana amin'ny fomba nentim-paharazana noho ny fanoherana ny areti-mifindra, anti-homamiadana, ny fananana anti-diabeta ary amin'ny ankapobeny dia toy ny famerenenenan'ireo marary; indrindra ny antibacterial factor, insuline, vitaminina ...
Filôzôfia amin'ny fiainana hahafantarana ny fahasambarana sy ny lakilen'ny fahasalamana (Video)
Miasa i Irene mba hahitan'ny olona fahasalamana sy ny dikan'ny fiainany: "ny fiainako manontolo dia ny fikatsahana fahasalamana sy fahasambaran'ny olombelona, ​​ary ...
Ashwagandha, zavamaniry hanana tanjaka soavaly
Ashwagandha dia zavamaniry malemy alain'ny ankolafy Solanaceae. Ashwagandha dia iray amin'ireo adaptogens be lanja indrindra ary ampiasaina amin'ny fitsaboana Ayurvedic. Botanists ...
Ahoana ny fomba hanasitranana ny vatantsika?
Mifoha izao tontolo izao fa, rehefa manome ny tena izay ilainy isika dia mahavita manasitrana izay noheverintsika ny vatana ...
Fantaro ireo toetra manasitrana mahasalama amin'ireo fito holatra ireo
Ny mycotherapy dia misy fitsaboana amin'ny fampiasana holatra izay misy fanasitranana. Ny mycotherapy dia manolotra nalaina avy amin'ireo holatra maina izay manana toetra ara-pahasalamana. Holatra Blazei Ilay "holatra ...
Hitan'ny mpahay siansa fa ny fifadian-kanina dia miteraka fanavaozana ny sela
Ny fomba fahasalamana taloha dia manaporofo fa mahomby amin'ny fomba maro. Ny mpahay siansa izao dia nahita ny porofo voalohany momba ny fitsabahana voajanahary izay mitarika ny fahateren'ny ...
Tongolo lay: Vermifuge, mampihetsi-po, mihena, antibiotika ary antiseptika
Tany Ejipta fahiny, ny tongolo lay dia nampiasaina be. Nozaraina vola maimaim-poana amin'ny mofo amin'ny mpanao piramida izy io. Misaotra betsaka, ity farany tsy nisalasala nandà ny tsy miasa raha ...
Ny zavamaniry afrikanina izay eo am-pelatanan'ny fandringanana dia hampiato ny fihanaky ny sida
Vusamazulu Credo Mutwa dia Sangoma (Manasitrana-Man) avy any Afrika Atsimo. Izy dia mpahay tantara ofisialin'ny firenena Nation. Shaman malaza eran'izao tontolo izao ary manam-pahaizana manokana, niasa tamin'ny tantara izy ...
Ny ozonator no fomba tsara indrindra hamonoana mikraoba, bakteria ary virus
Miaraka amin'ny ozonator manokana namboarina manokana ho an'io dia azo atao ny manisy ozonisera amin'ny rano any an-trano sy menaka voajanahary ho an'ny: - Fampiharana sy fandroana antifungaly ...
Page 1 ny 12 1 2 ... 12 manaraka
Ampio hampiroborobo ity tranonkala ity amin'ny fizarana ity pejy ity
Raha te hamaky ny lahatsoratra rehetra ianao, dia mila mizara indray mandeha ny tranokala. Misaotra anao
Ity fikandrana ity dia hikatona ho azy ao anatin'ny segondra 13